Lavakombarika - Clarisse Ratsifandrihamanana - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
Dia voavaky ihany ito boky Lavakombarika - Clarisse Ratsifandrihamanana - rehefa notadiavina elaela, nanahirana ny nahitana azy. Nahafinaritra ny famakiana, maro ireo sombintantara nosoratany tao ary samy manana ny hanitra ho azy avokoa.
Ireo lahatsoratra rehetra ireo dia ao anatin'ny fahaizan'i Clarisse Ratsifandrihamanana mifehy ny fomba fanoratana. Voafehin'ny mpanoratra manontolo ny asasoratra nataony.
" Nihorohoro ny vahoaka, nanombina ny tahiry ambata ; izay tsy nanan ny vonona dia nivarotra kely : vokatry ny tany, ankoho amam-borona " (Ramaitsoakanjo, p. 76)
Maro tsy voatanisa ny fihomehezana ao anatin'ireto tantara rehetra nosoratan'i Clarisse Ratsifandrihamanana : Tsy matahotra mpamosavy aho, Miandry razana, ary indrindra moa Iza aho ?
" I Sely ? - tena renibeko mihintsy ! ary satria ny vadin'ny renibeko dia dadabeko ... dia vonjeo aho rey olona, ampahafantaro ahy : Iza aho ? ... ny tenako vadin'i Sely, renibeko i Sely ka moa Dadaben'ny tenako aho ? Mila ho adala ny lohako : Iza aho ? " (Iza aho ?, p. 151)
Na dia fohy sy voafintina aza ireo sombintantara dia mahavariana fa dia misy hevitra fonosiny daholo.
Mampieritreritra ny hevitra fonosin'ny tantara hafa toy Lavakombarika, Ikalomanga, Hiakatra ny Anglisy. Tena nahitana fa misy tokoa ny zavatra mitranga amin'ny fiainana ka mitondra lesona sy hanatra ho an'ny hoavy rehetra.
" Mitondra ahy ho aiza ny diako, ary inona indray no havoakan'ny ampitso ? (Ikalomanga, p. 70)
Ahitana ny fomba fiainan'ny malagasy ny sombintantara, ahatazanana ny tontolo izay firiariavan'ny olona tsirairay ihany koa ary tsy latsa-danja ao anatin'ireo sombintantara ihany koa ny fomba fisainan'ny Malagasy.
" Taizan-drenikely, hono, i Dadabenay, dia irey amin'irony renikely tsy mataho-voamason-jaza, mpanongo mangina, mpanao zara-vilana et am-pisakafoana. " (Ny taolan'i mampikomy, p. 124)
Tsy ho vita fehezina tsirairay ireo sombintantara miisa 16 nefa hita ihany koa fa sombintantara manana ny maha-izy azy daholo na amin'ny hevitra na amin'ny haingon-teny isan-karazany. Toy ny mahatazana ireto olona sy ny manodidna rehetra ny mpamaky raha vao mitantara iny Clarisse Ratsifandrihamanana :
" Toy ny rivotra mihevaheva eny amin'ny rindrin'efitro ny matoatoan'i Dada, ny masoko mandavaka ny haizina dia indreo mahita ny halohalon'ny tsanganany ary ny tara-pahazavan'ny diavolana misisika eny amin'ny elanelam-baravarankeliko dia toy ny hanatitra ny fijeriny ... " (Matoatoa, p. 35)
Afa-po sy nahita soa tokoa nandritra ny famakiana ny Lavakombarika, sady izay vao fantatro ny dikan'io teny io.
Tsy hahita ny kisarisary fonon'ny boky hapetraka eto miaraka amin'ity lahatsoratra ity aho. Dia samy maka an'eritreritra izay mety ho tarehin'ny fonom-boky ny tsirairay !
Kanjo tampoka be androany 06 jona 2014, indro nisy namana nanome ilay boky nisy sary ny fonony ! Indro fa zaraiko.
Ho avy ny maraina - Esther Rasoarimalala Randriamamonjy Madagascar : le coup d'Etat, l'élection et moi
Rainnot jack's 19/08/2016 09:46
Ten tsar akan leson aloh ireto sombitantar m/s ret fa mifon ny fahaizan mpamoron
Fabiolla 20/03/2016 08:24
Tena mampitomb faalalan be le bok ndridr t@ za 3em!!
RAMANGASON tambisoa roland 06/09/2015 19:25
tena mafinaritra b le boky,t@ ia 3e tao amin'i Lycee Binjamin Escand Ambositra no nanomboka nafatarako anio
RAMANGASON tambisoa roland 06/09/2015 19:24
Danie 12/01/2014 14:12
Io boky io no nasaina novakianay tamin'izahay 6ème ary dia tena babo tokoa raha izaho ...
teny tsotra saingy tena mahafehy tanteraka ny tiana ampitaina ...
MYR 14/10/2014 11:32
Manao ahoana i Ashley, tantara maromaro no ao anatiny ka sady vetivety ny famakiana azy no mahaliana. Sarotra amiko ny hamehy izany fa dia ny fahitako ny boky no nomeko eto.
Ashley 12/10/2014 13:30
Afaka omenareo " résumé "
MYR 14/01/2014 08:18
Manadratra avo ny teny malagasy, mitondra tokoa ny kolon-tsaina ...